Andriamifidisoa Zo · Novambra 2009 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Novambra, 2009
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Novambra, 2009
Masedoanina: Mihira Skopiana
Makedonia 24 Novambra 2009
Ny antoko mpihira kibo saoky ny nahiny “Mihira Skopiana” (Masedoniana: Распеани скопјани amin'ny endritsoratra Sirilika (grika) ary Raspeani skopjani amin'ny endri-tsoratra Latina) dia vondron'ireo olom-pirenena avy ao Skopje izay maneho ny heviny eo amin'ny sehatra sosialy amin'ny alalan'ny hira. Mihaona isan'alahady any amin'ny faritra samhafa manerana ity renivohitry ny Repoblikan'i...
Rosia: misaona ny fahafatesana tanora miady amin'ny fasisma
Rosia 24 Novambra 2009
Tanora miady amin'ny fasisma anjatony no nivory tao ampovoan-tanànan'i Moskoa. Misaona ny namonoan'ny neo-nazi an'i Ivan Khutorskoy, mpikatroka ao amin'ny “Antifa,” hetsika rosiana manohitra ny fasisma ry zareo. Nolazain'ny [ENG] mpamaham-bolongana chtodelat fa ity no vono nihatra aman'aina fahaenina tamin'ny mpikambana amin'ny “Antifa” tao Rosia tao anatin'ny taona vitsivitsy. Azonao...
Alzeria 22 Novambra 2009
Iza no nino fa niteraka fifanenjanana teo amin'ny firenena roa tonta ny fihaonana baolina fandaka (football) iray? Tafakatra any amin'ny dingana tsy novisavisaina ny fifanandrinana teo amin'i Ejipta sy Alzeria ka maro ny mpamaham-bolongana no mihevitra fa tsy misy fifandraisany amin'ny lalao fiadian-toerana handraisana anjara amin'ny fifaninanana ho tompondaka manerantany izao gidragidra eny an-dalambe izao. Mitantara ho antsika i Tarek Amr ary mandika azy ho teny malagasy i Jentilisa.
Brezila: famoizana ilay mpitari-dalan'ny resaka niomerika
Amerika Latina 21 Novambra 2009
Malaza amin'ny resaka niomerika any Brezila i Daniel Pádua . Saripika nentin'i Cátia Kitahara ao amin'ny WordPress-BR. Namoy ny iray amin'ny mpitari-dalana amin'ny resaka niomerika androany (zoma) i Brezila. Nanao fizaham-pahasalamana i Daniel Pádua [pt] (fantatra amin'ny hoe @dpadua ao amin'ny Twitter) ka fantatra fa tratran'ny homamiadana ary dia lavo...
Iràna 17 Novambra 2009
Fahalalahàna miteny 03 Novambra 2009
Shina 02 Novambra 2009
Nanomboka niady hevitra ny amin'ny drafi-panavaozana ny lalam-pifidianana, mba hampitovy lanja ny vaton'ny any an-tanandehibe ny vaton'ny any ambanivohitra ny mpanao lalàna faratampony any Shina, ny Antenimieram-Pirenena entim-Bahoaka. Voapetraka hovakiana voalohany nandritra ny fivoriana fanao isan-droavolana faha-11 teo anivon'ny vaomiera maharitra tamin'ny herinandro teo ity volavolan-dalàna ity, izay mametraka fa...